कहिलेदेखि खुल्छ दसैँको अग्रिम टिकट... :: कमल नेपाल :: Setopati
कहिलेदेखि खुल्छ दसैँको अग्रिम टिकट बुकिङ ?
दसैँका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्ने सम्वन्धमा सरकार र व्यवसायीबीच मतभेद बढेको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र ट्राफिक प्रहरीबीच आज भएको छलफलमा मतभेद बढेपछि बिना निश्कर्ष टुङ्गिएको छ।
छलफलमा विभागले आगामी १५ गतेबाट टिकट बुकिङ खोल्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गरेको थियो। व्यवसायीहरुले भने टिकट बुकिङका लागि पाँच वटा मुख्य शर्त अघि सारेका छन्। बैठकमा आफूहरुले पाँच वटा मुख्य मागहरु राखेको र ति मागहरुको सम्वोधन नभइकन अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न नसकिने यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए।
व्यवसायीले बसहरुमा सामान लोड गर्नका लागि ‘क्यारियर’ (छत) राख्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। क्यारियरमा आफूहरुले मानिस नराख्ने तर सामान राख्नलाई अन्य ठाउँहरु नभएकाले त्यो विकल्प खुला गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘यदी क्यारियरमा मान्छे राखे हामी जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार छौँ, तर चाडपर्वमा सामान धेरै हुन्छ, ति सामान राख्ने विकल्प त हामीलाई चाहियो’ सिटौलाले भने।
त्यस्तै २०६९ सालदेखि वैज्ञानिक रुपमा भाडा समायोजन नभएकाले दसैँअघि नै भाडा समायोजन गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले भने दसैँ र तिहारपछि मात्रै भाडा समायोजन गर्न सकिने अडान लिएको छ।
‘गत वर्ष पनि दसैँपछि समायोजन गर्ने भनेर झुक्याइयो अहिले पनि त्यही भनिँदैछ हामीले के भनेर विश्वास गर्ने?’ उनले भने।
यसअघि भाडा समायोजनका लागि गठित समितिले भाडा समायोजन गर्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। विभागले भने दसैँअघि भाडा बढाउन नमिल्ने बताएको छ। विभागका प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेले चाडपर्व सकिएपछि समायोजन गर्न सकिने बताए।
उनले भने ‘दसैँअघि भाडा बढाउनु हुँदैन, त्यसपछि समितिले दिएको सुझावलाई आधार मान्दै भाडा समायोजन गर्न विभाग तयार छ।’
उपत्यकाबाट थानकोट हुँदै बाहिरिने बसहरुको जाँचपास टेकुबाटै गर्ने निर्णयप्रति व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन्। टेकुबाट जाँच पास गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन भद्रगोल हुने भन्दै उनीहरुले १४ अञ्चलमा नै यो सुविधा पुर्याउन माग गरेका छन्। यस विषयमा भने ठूलो असमझदारी नरहेको विभागले जनाएको छ।
सडकको दुरावस्था हटाउन र नारायणगढ मुग्लिन सडक खण्डलाई उचित व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन्। यसैबीच यो पटक नयाँ बसहरु नथपिने भएका छन्। महासंघका महासचिव सिटौलाले बैंकहरुले गाडीमा जोखिम मानेर लगानी गर्न नचाहेको आरोप लगाए।
‘बैंकहरुले पनि लगानी नगर्ने, सडकको दुरावस्था उस्तै भएकाले यो पटक नयाँ बसहरु थपिँदैनन्, तर पुराना बसहरु पर्याप्त छन्’ उनले भने। आफ्ना मागहरु सम्वोधन गरिए भएका गाडीहरुबाटै घर जान चाहने सबैलाई सहज रुपमा यात्रा गराइने उनले दावी गरे।
‘गाडीको अभाव भनेर कुनै पनि यात्रुलाई घर जान समस्या पार्दैनौँ, यो ज्ञारेन्टी हामी लिन्छौँ तर हाम्रा मागहरु सर्वसाधारणको हितको पक्षमा छ’ उनले दावी गरे। माग सम्वोधन भएपछि जुनसुकै क्षेत्रमा दसैँका लागि गाडीहरु संचालन गर्न आफूहरु तयार भएको उनले बताए।
प्रकाशित मिति: आईतबार, भदौ ११, २०७४, ०५:१८:३०